Wariyaha Idaacada Fm | Gudbiyaha Idaacadda Fm ee jaban |Xalka Barashada Masaafada
Raadiyaha Turnkey Studios
Istuudiyow Turnkey Radio – Saldhig raadiyaha FM oo dhameystiran – Xalka Raadiyaha
FMSUER Waxay bixisaa xidhmooyin badan oo furaha furaha ah oo loogu talagalay idaacad dhamaystiran, goobta gudbinta FM, hawada, iyo istuudiyaha wax soo saarka oo qiimo jaban ah.
Dhammaystir fikradaada raadiyaha bilaw ilaa dhamaad Ka dhig martidaada inay ku dareemaan nafis qolka martida raaxo leh oo xirfad leh.
FMUSER TOP Studio waxay rabta inay noqoto raadiye heersare ah: waxa ku jira qolka martida, On-Hawada, iyo istuudiyaha wax soo saarka ama istuudiyaha kaydka hawada. Martigeliyayaashaada waxaa laga yaabaa in lagu qaabilo miis wareeg ah oo raaxo leh oo ay is dhexgalaan iyada oo loo marayo kormeerayaasha LCD oo ay heli karaan.
Labada daraasadoodba waxay ku xidhan yihiin shabakada, markaa istuudiyaha wax soo saarka ayaa loo isticmaali karaa sidii kaydka Hawada iyada oo loo marayo qalabka aamusnaanta iyo beddelka tallaabo. Goobta shaqada ee otomaatiga ah oo dhan hal-hal ee barnaamijyada 24/24h waxaa ku jira dhammaan qaybaha lagama maarmaanka u ah hawlgalka hal ama ka badan raadiye: Ciyaarta, baahinta, qorsheynta ganacsiga, diiwaangelinta, wax ka beddelka, iyo soo saarista kadib.
Dhammaan qalabku waa tayo aad u sarreeya, oo ay soo saaraan noocyada ugu fiican ee suuqa baahinta. Cod-sameeyaha ugu fiican ee codka maqalka iyo isku-darka, oo leh laba talefan oo isku-dhafan oo loogu talagalay wicitaannada soo socda iyo kuwa baxaya, waxay bixiyaan dhegaystayaal iyo magdhow. Ciyaartoyga CD oo leh USB iyo MP3 ayaa ku jira.
Miis iska-xoqid waara oo leh 19? armaajooyinka rack loo dhisay si ay u qabtaan dhammaan qalabka oo ku habboon isticmaalka 24/24h ee baahinta.
Kooxdayada khubarada ah ayaa diyaar u ah rakibidda iyo tababarka.
STUDIO RADIO XAL DHAQAN
Sahayda iyo rakibida dhamaystiran:
Istuudiyo Wax Soo Saarka Dijital ah.
Nidaamyada otomaatiga ah.
Xalalka istuudiyaha ee hore loo sii xidhay.
Goobta Gudbinta Studio STL.
Gudbiyaha FM (DDS) ee baahinta raadiyaha.